Optometrists Job Description / Ọrụ Template na ọrụ - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Optometrists Job Description / Ọrụ Template na ọrụ
Optometrists Job Description / Ọrụ Template na ọrụ
Jacob June 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 490 Echiche
ịchọpụta, jikwaa, and treat disorders and ailments of the human eye and visual system. Study eye and graphic process, identify impairments or issues, recommend corrective contacts, and offer remedy. Might suggest healing drugs to treat particular vision situations.
Ọrụ Nkà Iwu
nye, suggest, alter and healthy perspective supports that are other as well as glasses, kọntaktị.
Job eme mkpa
Active-Listening-Supplying entire focus on what other folks say, using time and energy to comprehend the things being created, ịjụ ajụjụ ajụjụ ndị dị ka ezigbo, na mgbe interrupting na ufodu na-adịghị anakwere.
Som-Iji mgbakọ na mwepụ na-edozi nsogbu.
Tracking-TrackingPEREvaluating effectiveness of oneself, ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị ọzọ, or corporations consider remedial action or to produce enhancements.
Social Perceptiveness-Ịnọ bụghị amaghị nke ndị ọzọ’ ọchịchọ na ihe ọmụma mere ha zaghachi ha n'ihi na ha na-eme.
Nchikota-Ịgbazi omume na mmekọrita othersI eme.
Teaching-akụziri ndị ọzọ otú ka a aga.
Nkeji nkeji-agbakwụnye, ngwaahịa, ngwaahịa, cabling, ma ọ bụ ngwa na-emezu chọrọ.
Quality-Control Evaluation-Performing inspections and checks of products, ọrụ, or functions to judge efficiency or quality.
Systems Analysis-Determining what sort of method must perform and how adjustments in functions, ọrịa, along with the surroundings may affect outcomes.
Management of Savings-Determining how cash will be spent to acquire the job performed, na bookkeeping banyere ndị a expenditures.
Operations of Product Assets-Finding and observing towards the appropriate utilization of devices, atụmatụ, na onunu nwere na mkpa ime họrọ ọrụ.
Supervision of Personnel Resources-Pointing individuals because they, guzosie ike, na-ebute ịrụ, pinpointing the very best people for that career.
ọzụzụ iru eru Knowledge Mkpa
Ọrụ Control Nkà Mkpa
Ihe nweta / Mgbalị – %
Ịnọgidesi Ike – %
mgbalị – %
Iche banyere Ndị ọzọ – %
Social Ndọtị – %
Njikpa onwe – %
Pressure Ndidi – %
Egosipụta / Agagharị – %
pụrụ ịdabere – %
Elekwasị anya na Ihe – %
ọganihu – %
gbasara nyocha Echiche – %